लुसिया - शैतानको दुलही | Apg29
बारेमा लुसिया सत्य।
लुसिया एक क्याथोलिक सेन्ट गर्ने धेरै उपासना डिसेम्बर छ। चर्च र सांसारिक प्रसङ्गहरू दुवै आफ्नो फरक लुसिया रेल, अन्य बीचमा।
केसर भएको बिरालोहरु नाम "Solbröd" थियो। "केसर रोटी" "लुसिया" र साधन आउँछ "लुसिफरको गरेको दुलही।" लुसिफरको शैतानको लागि एउटा नाम छ। अर्को शब्दमा, यसलाई "शैतानको दुलही" हो।
बालिका र वयस्क महिला उनको कपाल मा मोमबत्ती संग लुसिया रूपमा माथि पोशाक गर्दा यसको बारेमा सोच्नुहोस्। तिनीहरूले वास्तवमा रूपमा माथि लुगा छ कि यो कसले हो? र जो तिनीहरूले espouse छ?
जब मान्छे गाउन र तिनीहरूले येशूको उनको प्रतिस्थापित छ त प्रकाश दिन्छ जो लुसिया छ भनी घोषणा। त्यो येशूको बरु छ कि एक एटिक्राईष्ट भएको छ।
यो येशूको छ लागि जो साँचो हल्का साँच्चै ल्याउँछ! यसलाई हामी प्रशंसा र उपासना छौँ उहाँलाई छ। मरेको धेरै वर्ष मरेको गर्ने "सन्तहरू" छैन।
लुसिया मना को अनुकूलन मूर्तिपूजक मूल हो।
सेन्ट लुसिया मनाउन क्याथोलिक चर्च "Christianized" सुरु संग मूर्तिपूजक लुसिया उत्सव। तर एक सेन्ट मनाउन पाठ्यक्रम उत्तिकै गलत छ!
लुसिया को नर्डिक क्षेत्र मा लामो मनाइन्छ गरिएको छैन
अर्थ "प्रकाश," स्वीडेन वा नर्डिक देशहरुमा लामो मनाइन्छ छैन जो गरिएको "लुसिया" वा "केसर"।
त्यो लगभग पूर्ण अज्ञात थियो अघि - यो तिनीहरूले सेन्ट लुसिया मनाउन थाले कि 1700s थियो।
तर midwinter लामो मनाइन्छ गरिएको छ, र dises वा महिला सुरक्षा देवताहरूका एक प्रतिनिधिको रूपमा, "Lucias" सम्मान आंकडा भयो र महिमा।
यो डिसेम्बर 13 मा Midwinter दिन मा भयो।
"लुसिया उत्सव" को Prokopios
"लुसिया उत्सव" को पुरानो कथा ग्रीस मा 500 का तल "Ultima थुले" यस्तो लेखे रूपमा, Prokopios आउँछ।
"तर दस दिन अनन्त रात को बाँकी हुँदा, एक दूत अप जो यी भागहरु छन् उच्च पहाड, एक मा चढती, र जहाँ उहाँले तल DALARNA बस्ने भएको मानिसहरूका लागि, एक जलेको अन्तमा रोशनी, उहाँले सूर्य टाढा बढ्दो, र 40-दिन लामो रात छिट्टै माथि हुनेछ देखेको। त्यसपछि महिला आफूलाई सजाउनु गर्न, माथि torches र मोमबत्ती उत्तरी देशमा लिनुहोस्, र सेतो राज बस्त्र मा ढाकिएको छन्, र केही रातो यदि कमर, तिनीहरूले छन्, पराल वा एक बेल्ट। "
को भूत Lussi
महिला डेमो सिस्टम Lussi लुसिया को आधार छ।
को शीतकालीनक्रान्ति मध्य युग मा डिसेम्बर 13 को आसपास स्थान लियो। त्यसपछि महिला डेमो सिस्टम Lussi तहसनहस।
को भूत Lussi यसरी लुसिया लागि तर्क छ। जो डिसेम्बर तेह्रौँ मा पतन लुसिया एक पटक थप क्याथोलिक सेन्ट संग भन्दा शैतानको नाम लुसिफरको सँग सम्बन्धित थियो।
को सेन्ट लुसिया
डिसेम्बर 13 मा उत्सव पुरानो छ तर नाम र सेन्ट लुसिया संग सहमतिलाई एकदम नयाँ हो।
लुसिया सिसीली मा मनाइन्छ। त्यहाँ तिनीहरूले आंकडा जस्तै षड्यन्त्र मा उनको गरे।
सिसीली मा लुसिया तिनीहरूलाई लागि उपहार बाहिर बच्चाहरु र हात देखि खाना प्राप्त लिन्छ र त्यो एक उडान गधा छ। गर्न सक्छन् कसैले उनको व्यक्तिको अनुहार मा उनको खरानी फालिएको भेट्यो।
केसर बिरालो नाम को सेन्ट लुसिया देखि तर शैतानको नाम लुसिफरको देखि Originate छैन।
तर्साउन को "केसर" (लुसिफरको - शैतानको), रंग मानिस भगवा संग पहेलो बन्स।
क्याथोलिक चर्च गरेको भ्रम
सामान्य रूपमा, क्याथोलिक चर्च तिनीहरूले सन्तहरू सिर्जना गरेका गर्दा अन्धविश्वास, मसीही विश्वास, दानव र दुष्ट संग मिश्रित।
हामी सन्तहरू वा दुष्ट आवश्यक छैन। हामी येशू ख्रीष्टको आवश्यक छ। यो केवल हल्का छ जो येशूको छ र उहाँले हामी उहाँलाई विश्वास गर्दा हामीलाई प्रकाश दिन्छ!
क्याथोलिक सेन्ट - मूर्तिपूजा
तिनीहरूले मृत "सन्तहरू" उपासना तर तिनीहरूले उपासना र मूर्तिपूजा दोषी छन् भनेर बुझ्न।
"तर म उपासना छैन लुसिया!" घोषणा तपाईं appalled सक्छ। के तपाईं "सान्ता लुसिया" गाइरहेका केही बिन्दुमा छ?
शैतानको - नाम लुसिया लुसिफरको जस्तै शब्द आउँछ। मलाई विश्वास छ, शैतानको पक्कै छैन प्रकाश हुनेछ।
तर मानिसहरूले यसलाई तिनीहरूले येशूको संग उनको प्रतिस्थापित छ त प्रकाश दिन्छ जो लुसिया छ भनी घोषणा गर्दा। त्यो येशूको सट्टा एउटा antikristlig प्रतीक भएको छ।
बरु येशूले भारोत्तोलन। यो अन्धकार अप रोशनी जसले छ।
यशैया 9: अन्धकारमा हिंडे जो 2.The मान्छे ठूलो ज्योति देखेका छन्; मृत्यु देश को छाया हुनेछ प्रकाश चम्कने निस्कने ती जीवित मा।
यूहन्ना 1: 9। हरेक मानिसलाई प्रकाश दिन्छ कि साँचो ज्योति संसारमा आउँदै थियो।
अपवित्र र व्यावसायिक प्रसङ्गहरू
लुसिया स्वीडेन र केही अन्य देशहरूमा डिसेम्बर 13 मा मनाइन्छ। लुसिया विभिन्न चर्च, धर्मनिरपेक्ष र व्यावसायिक सन्दर्भहरूमा मनाइन्छ दुवै। यो राम्रो उनको सांसारिक र व्यावसायिक प्रसङ्गहरू मनाउन किनभने, हामी यो मसीही छ भनेर बुझ्न। येशू ख्रीष्टको बारेमा भएको थियो यस्तो सन्दर्भहरूमा हाइलाइट गरिएको थियो। लुसिया गर्न बाइबल के गर्न केही छ। त्यो हाल एक आविष्कार हो। बारेमा लुसिया द दन्त्यकथा पनि बाइबलीय छैन, तर साँच्चै मूर्तिपूजक र छायादार छ।
लुसिया 100 वर्ष उहाँको मृत्यु canonized थियो एक क्याथोलिक सेन्ट छ। त्यो सिरैक्यूज मा सिसीली मा कार्यान्वयन थियो 304. त्यो एक मसीही हुनुको आरोप थियो, र यो रोमी सम्राट्को विरुद्ध विद्रोह हुन मानिन्थ्यो।
त्यहाँ बारेमा लुसिया धेरै दन्त्यकथा हो र यो तिनीहरूलाई अलग राख्न कठिन छ। एक मसीहीहरूले लुकाउने थिए जहाँ उनले रोम गरेको भूमिगत catacombs खाना गए छ। त्यो अँध्यारो सुरुङको मा गए जहाँ, त्यो उनको टाउको मा मोमबत्ती राख्नु हेर्न। युवा बालिका तिनीहरूले लुसिया कल्पना गर्दा झूमर छ किन तपाईं अनुकूलन छ।
एक बैरल आँखा
त्यो अक्सर आफ्नो आँखा एक बैरल लगाएका संग चित्रण गरिएको छ। त्यहाँ उनको विवाह सक्ने छैन मूर्तिपूजक राजकुमार आफ्नो आँखा बाहिर tore एक लिजेन्ड छ। त्यसपछि यो उनको बाहिर नयाँ र राम्रो आँखा गयो।
क्याथोलिक संसारमा, त्यो आँखा patroness र Ophthalmologicals उनको नाम चलाइएको छ। लुसिया पनि सिरैक्यूज को संरक्षक सेन्ट छ।
केश मा प्रकाश
डिसेम्बर 13 मा, त्यसपछि सामान्यतया लुसिया ज्योति बाल मा ल्याउन, तर यो ज्योति दिन्छ जो त्यो छैन, यो येशू हुनुहुन्छ। र उहाँले मात्र होइन ज्योति आउँछ - उहाँले हल्का छ। यसलाई हामी टाढा येशूले हाम्रो Gaze लिन कुराहरू के छैन महत्त्वपूर्ण छ।
नाम लुसिया लक्स आउँछ, प्रकाश मतलब जो। को शैतानको को नाम हो जो, लुसिफरको संग समानता नोटिस!
विवाह गर्न वाचा
अर्को पौराणिक कथा लुसिया विवाह गर्न परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो भन्ने छ। एक जवान उनको विवाह सक्छ जब, उहाँले उसलाई सम्राट लागि रोम मा त्यो एक मसीही थियो भनेर संकेत गर्नुभयो।
एक वेश्यालय काम गर्न बाध्य गर्न त्यो सुनाइसकेको थियो। तिनीहरूले उनको ल्याउन आउँदा तिनीहरूले उनको विरक्तलाग्दो सकेन। त्यसपछि तिनीहरूले खम्बा मा उनको बाल्न प्रयास गर्नुभयो, तर जब यो पनि असफल भयो तिनीहरूले उनको beheaded। लुसिया गरेको कमर आसपास रातो ब्यान्ड बग्ने उनको रगत को एक प्रतीक हो।
को नर्डिक क्षेत्र मा, हामी एकदम हाम्रो गहन तरिका मा लुसिया मनाउन एक्लै छन्। तर इटाली केही भागहरु मा परम्परा छन्। उपहार लुसिया को स्मृति मा लुसिया दिन मा भियना छोराछोरी वितरण गर्दै 1300s विपत्ति तिनीहरूलाई सुरक्षित!
सिरैक्यूज शहर मा लुसिया केही सय किलो प्रतिनिधित्व एक मुर्ति procession मा एक हप्ताको लागि यो लगाएका। पनि Calabria मा शहर Amaroni तिनीहरूले एक procession मा लुसिया मनाउन, तर सहरको संरक्षक सेन्ट, स्यान्टाबारबारा को अर्को कम्पनी मा।
यो कि विशेषताहरू मसीही विश्वास त लुसिया मनाउन लाग्न सक्छ, तर यो मामला साँच्चै छैन। जसले साँचो ज्योति संसारमा आउँदै थियो येशू हाइलाइट राम्रो छ र उहाँले सबै मानिसहरूलाई ज्योति दिन्छ! (यूहन्ना 1: 9)
तिनीहरूले तपाईंलाई सुरक्षित गरिने छैन भनेर आफ्नो आँखा येशूबाट टाढा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भनेर कुरा छन्। क्याथोलिक सेन्ट एक यस्तो छ।
यो तपाईं केहि येशूले बन्द आफ्नो आँखा गरौं छैन महत्त्वपूर्ण छ। यो एक्लै प्रभु र मुक्तिदाता छ जो केवल येशूले छ!